Zimaphi izindlela zokuthola i-PR ephezulu yokulandela ama-backlink kusuka kubhulogi?
Ibhulogi ye-Commentluv iyindlela enhle yokuthola izinga eliphezulu le-backlink PR eliphezulu elivame ukushiya ama-webmasters ami. Lesi sihloko siyohlale siphikisana ukuxoxa. I-Blogger Commentluv inikeza izinzuzo zabo kubanikazi bewebhu njengoba zisiza ukwakha izixhumanisi ezinamandla njengoba zikubuyisela isixhumanisi esibonisa enye yeposi yakho yokuthunyelwe.
Kulesi sihloko, sizoxoxa ngezinye izindlela ezibalulekile ukuthi singakha kanjani u-PR ophezulu olandela ama-backlink kusuka kuma-blogger comment.
Ake siqale sixoxe ngalokho okushiwo ama-blogging comment and where to find them. Lezi zinhlobo zamabhulogi zikuvumela ukuthi uxhumanise okunye okuthunyelwe kwebhulogi yakho futhi uphinde ususe ijusi yokuxhumanisa yekhwalithi kumakhasi akho wewebhu. Abaningi be-webmasters bathi ukulandela ama-backlink kunenani elengeziwe lokusebenza kwe-website kunanoma yikuphi okulandelayo. Noma kunjalo, zombili lezi zinhlobo zinezinzuzo zokuthola ithrafikhi yomuthi. Ukuze udale iphrofayli yokuxhumanisa kwekhwalithi, udinga ukudala kokubili ukulandela nokulandela izinkomba zangemuva. Njengomthetho, akukho okulandelayo emuva kwezingxenyana eziphezulu ze-PR ezenza ukulandelana okusha kwe-backlink nokuphakamisa ukuhamba kwe-traffic kuwebhusayithi. Uma wenza ama-backlink kubhulogi yakho noma kumawebhusayithi, kufanele uhlale ukhumbule ukuthi ama-backlink azokwenziwa ngokusebenzisa isu elicatshangelwe kahle njengoba lithuthukisa ukubonakala kwebhulogi yakho.
Ngithanda umqondo we-Neil Patel wokwakha izixhumanisi. Uthole umqondo wokwakha ukuxhumana ngendlela evulekile. Le ndlela ikunika ithuba lokulandelela ukusebenza kwakho futhi uthathe isinyathelo esithile uma uhlelo olulodwa lungasebenzi.
Yenza ama-bookmarking sites
ngenxa yokubuyekezwa kokuhlelwa kwe-algorithm, iningi lamabhulogi anquma ukwenza izixhumanisi zayo zingalandeli ukuze zibuke izinjini zokusesha. Noma kunjalo, amanye ama-blogs commentluv asatholakala futhi anikeze abanikazi bewebhu abanezici ezingemuva ezilandela emuva.
Ngokuvamile, ukuthumela ibhulogi kuyindlela elula yokudala ama-backlink. Le ndlela ihlolwe ngabaningi be-webmasters abaphumelele, futhi uma kwenziwa kahle, kuletha imiphumela emihle ngokuphathelene ne-traffic, rankings, nokuguqulwa. Udinga ukuthatha isixhumanisi ukwakha njengendlela yokukhulisa ubudlelwane. Ekuqaleni, ngeke ikunikeze izinzuzo. Nokho, ngokuhamba kwesikhathi, uzokwazi ukwakha igunya futhi ukwandise ithrafikhi kuwebhusayithi yakho.
Abanye be-bloggers banciphisa inani lamazwana kwento ngayinye. Ivumela ukudala ukulandela okulandelayo ngemuva kokuhlaziya. Ukuphatha ibhulogi ngokwayo kuthatha ukuthi ngabe ukuvuma ukuthi ulandela ama-backlink noma cha. Uma beqaphela izenzo ezithile ze-spammy kusuka kusayithi lakho, kungenzeka ukuthi banqabela ukuthi ufake ama-backlink e-backf kubhulogi yabo. Kodwa-ke, uma bethola ukuphawula kwakho okuphilayo futhi kuhambisana nesihloko esicatshangelwe, bayokunika umvuzo nge-backfinks njalo uma ubeka amazwana kubhulogi abo.
Amathiphu wokudala ama-backlink ama-backlink kumazwana we-Commentluv
Okokuqala, zama ukungaboni i-spammy. Ukwakha idumela elihle kubhulogi, udinga ukushiya imibono ephezulu futhi ewusizo. Qinisekisa ukuthi ufunda ngokucophelela isihloko bese uqonda isihloko. Uma kungenjalo, uzobhala imibono engabambeleli iphuzu futhi ibheke okungavamile. Ngaphezu kwalokho, ungalokothi uzame ukukhangisa ibhizinisi lakho le-intanethi ekuphawuleni ama-athikili akudingeki imboni yakho. Uzosuswa kulokho futhi ungalokothi uthole ithuba lokuthola ama-backlink ayenzayo kule bhulogi. Kufanele uzame ukungadluli nge-backlinks yesixhumanisi njengoba kungase kubonakale kungokwemvelo kanye ne-spammy. Ngaphezu kwalokho, ngineluleka ukuba ugweme ukuphawula okukodwa namabili Source .